Xog:-Maleeshiyo Beeleed isku abaabulaya si ay u hor istaagaan Hawlgalka Xasilinta Amniga Caasimadda. – Hornafrik Media Network
Maleeshiyo Beeleed ka caraysan Hawlgalkii ka dhacay Jimcihii Degmadda Kaaraan ayaa ka wada Abaabul dagaal qaybo ka mida Waqooyiga Muqdisho, kuwaasoo doonaya inay is hortaag ku sameeyaan Hawlgalka Xasilinta Amniga Caasimadda.
Warar ay heshay Hornafrik ayaa sheegaya in Abaabulkan Ciidan ay ku lug leeyihiin Saraakiil Milatari iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda Waqooyiga Muqdisho, kuwaasoo ka caraysan siday wax u socdaan. Waxaana la arkayay Maleeshiyaadkan oo isku fidinaya Degmadda Kaaraan.
Gen Qaafoow, C/laahi Macalin Nuur, Ibraahim Sh Muxyadiin, Senator Muuse Suudi Yalaxoow iyo Siyaasiyiin kale ayaa ku lug leh abaabulkan. kuwaas oo u arka Fursad ay ku muujin karaan inay leeyihiin Cudud Ciidan oo wixii ay doonaan ku hor istaagi karaan Muqdisho. Waxayna Ciidamo Milatari ah uga yeerteen Gobolka Shabeeladda Dhexe oo ay fariisimo Ciidan ku leeyihiin 2 Guuto oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya.
Saraakiishan iyo Siyaasiyiintan ayaa sidoo kale wada isku dayo ay ku doonayaan inay Siyaasiyiinta Koonfurta Muqdisho ku qanciyaan iyagana inay dhinacooda ka sameeyaan Abaabul ciidan. si loo hor istaago Hawlgalka Xasilinta Amniga Caasimadda.
Ciidamadda Isku Dhafka ah ee ka wada Muqdisho hawlgalka Xasilinta ayaa Jimcihii hawl gal ay ka sameeyeen Kaaraan waxay ku soo qab qabteen Maleeshiyaad is hortaagay Mucaawino laga qaybinayay Degmadaasi. Waxaana Hawlgalkaasi ka dhashay Khasaaro dhimasho iyo Dhaawacba leh.
Shariif Xasan oo la kulmay Madax ka tirsan Shirkadda DP World iyo Dekeda Baraawe oo miiska saaran